AIA Myanmar က “Share The Love” ကမ်ပိန်းဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ် ပါဝင်ဆင်နွှဲ – MyTech Myanmar
AIA Myanmar က “Share The Love” ကမ်ပိန်းဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ် ပါဝင်ဆင်နွှဲ
AIA Myanmar သည် သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မျှဝေခံစားခြင်းလက်ဆောင်မွန်ဖြင့် “Share The Love” ကမ်ပိန်းကို စတင်ကြောင်း ယနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ AIA ၏ တစ်ဦးချင်းအာမခံ ပေါ်လစီဝယ်ယူထားသော မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ AIA Member ဟောင်းဖြစ်စေ၊ Member အသစ်ဖြစ်စေ မိမိတို့ ချစ်ခင်ရသူများအတွက် AIA မှ အလုံးစုံ ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် ကျန်းမာရေး အာမခံ ပေါ်လစီတစ်ခုကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ကောင်းကို (၁၀) လပိုင်း (၁၀) ရက်နေ့မှစ၍ (၁၁) လပိုင်း (၁၁) ရက်နေ့အတွင်း ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်ကို ရယူရာတွင် Member များနှင့် လက်ခံရရှိမည့်သူများပါ အပိုထပ်ဆောင်းငွေ ကုန်ကျစရာမလိုပါ။
အနှစ်သာရပြည့်ဝပြီး ချစ်ခင်စဖွယ် မြန်မာ့ရိုးရာပွဲတော်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်သည် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ဖွယ်ကောင်းလှသည့် မြန်မာတို့၏ ကျေးဇူးတင်ဂါရဝပြုခြင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အလင်းတန်းများ ခြုံလွှမ်းသော တစ်မူထူးသည့် ချိန်ခါသမယ လည်းဖြစ်သည်။ “Share The Love” နှင့်အတူ AIA Myanmar သည် Member များ အတွက် ချစ်ရ၊ ခင်ရသူများအား ကျန်းမာရေး အာမခံကို ပေးအပ်ပြီး ချစ်ခြင်းတရားနှင့် ကျေးဇူးတရားကို အချင်းချင်း အသိအမှတ်ပြုနိုင်ကြစေမည့် အခွင့်ကောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးကာ သီတင်းကျွတ်ကာလ၏ အနှစ်သာရ၊ စိတ်ဝိဉာဉ်ကို အသက်သွင်းရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယခုကဲ့သို့သော COVID-19 ကာလအတွင်းတွင် ချစ်ခင်ရသူတို့ကို ကျန်းမာရေးအာမခံ လက်ဆောင် ပေးခြင်းဖြင့် အသက်အာမခံနှင့် ကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း သတိပြုမိစေမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကမ်ပိန်းကို “Share The Love” ဆိုသည့် သတင်းစကားကို ပုံဖော်ရန်တင်ဆက်ထားသည့် ကမ်ပိန်းဗီဒီယိုနှင့်အတူ online လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များနှင့်လည်း မိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ မျှဝေခံစားတတ်မှုတွေကို မိတ်ဆွေတို့ တွေ့မြင်နေကြရမှာပါ။ မြန်မာပြည်သူတွေက အမြဲတမ်း အခြားသူတွေ အတွက်ကို စိတ်ရော၊ ကိုယ်ရော အားပေးကူညီတတ်ကြတယ်လေ။ ဒီကြင်နာမှု၊ ကူညီတတ်မှုနဲ့ ဖော်ရွေမှုတွေက လူအများစုအတွက် အထူးသဖြင့် သီတင်းကျွတ်ကာလအတွင်းမှာပေါ့လေ သူတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေကို တစ်သက်တာ စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ အကာအကွယ် တစ်ခု ဖန်တီးပေးလိုကြတဲ့ စိတ်ရင်းအကြောင်းခံပါပဲ” ဟု AIA Myanmar ၏ CEO ဖြစ်သူ Luc Ly က ဆိုသည်။ “မျှဝေခံစားခြင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ပြသခြင်းမျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို အဓိပ္ပါယ်ရှိလှတဲ့ သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်နှလုံးနီးစပ်မှုရှိနေစေဖို့ “Share The Love” ကမ်ပိန်းနဲ့အတူ ဒီပွဲတော်ကို ကျွန်တော်တို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Luc Ly က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
AIA Myanmar သည် COVID-19 ကာလအတွင်း မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားများအား ကျန်းမာရေး အာမခံလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချမှုနှင့် ကျန်းမာသုခကို ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်း ပေးရေးအတွက် “Share The Love” ကမ်ပိန်းကို ရည်ရွယ်ပြုလုပ်သည်။
AIA ၏ ပိုမိုကျန်းမာအသက်ရှည်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝများပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ဟူသည့် ကတိစကားကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် အနေဖြင့် AIA သည် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပိုမို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ နေထိုင်နိုင်ရေးတို့အတွက် လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပခဲ့သော AIA GOAL! တွင် Tottenham Hotspur ၏ နည်းပြများက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး ဘောလုံးဝါသနာရှင် ကလေးငယ် နှင့် လူငယ် ရာပေါင်းများစွာကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။ ယမန်နှစ်ကလည်း AIA ၏ ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် AIA GO! FOR LIGHT 5k ပရဟိတ ပြေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ကာ ပုဂံဒေသရှိ အိမ်ခြေတစ်ရာကို ဆိုလာပြားများ လှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။
လက်ရှိ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက AIA Myanmar ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သော https://www.facebook.com/AIA.Myanmar.MM/ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
Source – AIA Myanmar
MyTech Myanmar2020-10-12T16:34:00+06:30October 12th, 2020|News|